Rajbiraj Dainik - Daily News Portal From Rajbiraj
अख्तियारको आ“खा जिविस र शिक्षा कार्यालय सप्तरीमा
दैनिक संवाददाता राजविराज, २२ पुस । जिल्ला बिकास समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालित योजनाहरुमा भएको अनियमितता बारे अनुगमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उच्चस्तरीय टोली सोमवार राजविराज आईपुगेको छ । ...
विद्युत हुकिङ गर्ने ४५ जना पक्राउ
अमिर नारायण यादव राजविराज, २१ पुस । बिद्युत प्राधिकरण कार्यालय राजविराजले शुरु गरेको चुहाबट नियन्त्रण अभियान अन्तर्गत बिगत एक साताको अवधीमा सप्तरीको बिभिन्न गाविसबाट ४५ जनालाई पक्राउ गरी जरिवाना तिराएको छ । ...
सैनिक श्रीमति संघद्वारा शितलहर पीडितहरुलाई राहत वितरण
दैनिक संवाददाता राजविराज, २१ पुस । शितलहरबाट प्रभाबित सप्तरीको हरिहरपुर, पकरी र दिघवा गाविसका बृद्धबृद्धा, सुत्केरी, बिपन्न र आपाङ व्यक्तिहरुलाई नेपाली सेना सैनिक श्रीमति संघले राहत सामग्री तथा औषधी बितरण गरेको छ । ...
न्यानो नेपालबाट ठण्डी पीडितलाई कपडा बितरण
राजविराज÷अत्यधिक जाडोबाट पीडित सप्तरीको मलेठ र पकरी गाविसका डुम मरिक परिवारलाई शनिवार न्यानो नेपाल काठमाण्डौले कपडा बितरण गरेको छ । जाडोबाट पीडित मलेठ गाविस ३ स्थित डुम मरिकका पाँच जनाको परिवारलाई बस्तीमै पुगेर कडा बितरण गरिएको हो ।...
समानुपातिकतर्फ सप्तरीबाट चार महिलासहित १० सभासद्
राजविराज÷बिभिन्न दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको सभासद् मनोनयनको सुचिमा सप्तरीका चार जना महिलासहित १० जनाको नाम समाबेश भएको छ । यो सँगै सप्तरीबाट संबिधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्को संख्या अहिलेसम्म १६ जना पुगेको छ । त्यसमध्ये १४ जना पहिलो पटक संबिधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् । ...
४० लाख भन्दा बढीको घरमा सु“गुर बस्छन् क्लिनिकमा बालबालिका होइन् दुरव्यसनी आउ“छन्
नवीनकुमार गुप्ता राजविराज, १९ पुस । राजविराज नगरपालिकाको मुख्य सडकमा एउटा घरमा छ । जसमा मानिस होइन् सुँगुरहरु बस्छन् । अहिले त्यो घरको मूल्य ४० लाख भन्दा बढी पर्छ । नगरपाकिाले त्यत्रो लगानी गरेर सुँगुरलाई घर प्रदान गरेको होइन् । त्यो घर वारुणयन्त्र राख्न बनाइएको थियो । तर घर तोडेर नयाँ घर बनाउँदा पनि वारुणयन्त्र नभई सुँगुरहरुको बस्ने थलोको रुपमा प्रयोग भएको छ । ...
सप्तरीमा ३४ हजार भन्दा बढी साक्षर
दैनिक संवाददाता राजविराज, १९ पुस । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीले सञ्चालन गरेको साक्षरता अभियान अन्तर्गत सप्तरीमा बिगत दुई बर्षको अबधिमा ३४ हजार भन्दा बढी निरक्षरहरुलाई साक्षर बनाइएको छ । साक्षरता अभियान अन्तर्गत आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा १७ हजार ५ सय ७१ जना र आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा १६ हजार ५ सय ५५ जना गरी ३४ हजार १ सय २६ जना निरक्षरहरुलाई साक्षर बनाइएको हो । ...
चिसोका कारण सप्तरीमा दश जनाको मृत्यु
दैनिक संवाददाता राजविराज, १८ पुस । अत्यधिक चिसोका कारण कठ्याङिग्रएर सप्तरीमा बिहीवार विहान दुई जनाको मृत्यु भएको छ । यो सँगै बिगत दुई साताको अबधिमा चिसोका कारण कठ्याङिग्रएर मृत्यु हुनेको संख्या दश पुगेको छ । पछिल्लो पटक बिहीवार विहान अत्यधिक चिसोका कारण सप्तरीको हनुमाननगर गाविस–१ घरभई हनुमाननगर–७ मा बस्दै आएकी ७२ बर्षीया अनुरागीदेवी मण्डल र लोहजारा गाविस–५ निवासी ६५ बर्षीया जानकीदेवी साहको कठ्याङिग्रएर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ...
माछा नदिएको निहु“मा कुटपिट गर्दै श्रीमान्लाई पक्राउ गरेको आरोप
दैनिक संवाददाता राजविराज, १८ पुस । माछा नदिएको निहुँमा को. बर्साइन प्रहरी चौकीका प्रहरी नायव निरीक्षकसहितका प्रहरीले आफ्ना श्रीमानलाई कुटपिट गर्दै पक्राउ गरेको सप्तरीको को. बसाईन गाविसकी एक महिलाले आरोप लगाइएकी छिन् ।...
आ“प प्रबद्र्धन सम्बन्धि अगुवा कृषकहरुलाई तालिम
दैनिक संवाददाता राजविराज, १७ पुस । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सप्तरीको आयोजनामा बुधबारदेखि जिल्लाका आँप उत्पादक अगुवा किसानहरुको लागि तीन दिने आँप प्रबद्र्धन सम्बन्धि तालिम शुरु भएकोे छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तालिम हलमा शुरु भएको तालिममा बिभिन्न गाविसका २५ जना आँप उत्पादक कृषकहरुको सहभागिता रहेको जनाएको छ । ...